आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने ‘इमर्जेन्सी’ समस्या : किन हुन्छ यस्तो ? « City Dainik
आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने ‘इमर्जेन्सी’ समस्या : किन हुन्छ यस्तो ?
डा सुमनविक्रम अधिकारी
आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्या सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । धेरैलाई यस्तो समस्या पनि हुन्छ र भन्ने लाग्न सक्ला । तर यो एउटा इमर्जेन्सी समस्या हो । जसको समयमै उपचार भएन भने ज्यान समेत जाने खतरा हुन्छ । यस्तो समस्या खासगरी ६ महिनादेखि ६ वर्षका बच्चामा देखिन्छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत चाहिँ २ वर्षभन्दा मुनिका बच्चामा हुनेगर्छ।
आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्या स्वस्थ र हृष्टपुष्ट बच्चाहरुलाई हुनेगर्छ।
यस्तो समस्या पर्दा हाँसखेल गरिरहेका बच्चा एक्कासी पेट दुखाइका कारण रुने र घोप्टो परेर बस्ने गर्छन् । फेरि एकैछिनमा दुखाइ कम भए हुन्छ र बच्चा पुनः सामान्य अवस्थामा जस्तै खेल्न थाल्छ । तर, दुखाइ फेरि सुरु भएर बच्चाले बान्ता गर्ने, रगत मिसिएको दिसा गर्ने र पेटमा गाँठो वा डल्लो भेटिने लक्षण देखिन्छ।
कहिलेकाहीँ अरु नै कारणले पेटको अल्ट्रासाउन्ड गर्दा यो रोग पत्ता लाग्नेगर्छ।
चिकित्सा विज्ञानले आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्याको खास कारण पत्ता लगाएको छैन । तर, मौसम परिवर्तनले हुने भाइरल इन्फेक्सन अथवा रोटो भाइसरले गर्दा यस्तो समस्या देखिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।
बच्चाहरुको पेटको अल्ट्रासाउन्डमा आन्द्राभित्र अन्द्रा पसेको देखिन्छ । अल्ट्रासाउन्ड नै यो रोग पत्ता लगाउने भरपर्दो विधि हो।
उपचार नगरे के हुन्छ ?
यो समस्यामा आन्द्रा मात्रै भित्र नछिरेर आन्द्रालाई रगत सञ्चालन गर्ने नशा पनि छिरेका हुन्छन् । ती नशा च्यापिएर रगत सञ्चालनमा अवरोध हुन्छ । जसले गर्दा भित्र छिरेको आन्द्रा कुहिन थाल्ने र प्वाल पर्ने हुन्छ । बच्चाको अवस्था झन् झन् नाजुग हुने, खाना नखाने, पेट फुल्ने, दिसामा रगत देखिने, पेटमा डल्लो आउने आदि हुन्छ । सही समयमा उपचार नगरे बच्चाको ज्यानै पनि जान सक्छ।
यो बच्चाहरुमा हुने ‘सर्जिकल इमर्जेन्सी कन्डिसन’ हो । जसको उपचार पहिला शल्यक्रियाबाट मात्र सम्भव थियो । तर अहिले नयाँ–नयाँ प्रविधिको मद्दतले यो जटिल समस्या बिनाशल्यक्रिया पनि गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रविधि अनुसार दिसा गर्ने ठाउँबाट हावा या पानी दिएर भित्र छिरेको आन्द्रालाई धकेलेर पहिलेको जस्तै गराउन सकिन्छ । तर, यो प्रविधि कुनैकुनै अस्पतालमा मात्रै छ।
पानीभन्दा हावा प्रयोग गरी ठिक गर्ने प्रविधि बच्चाका लागि अलि बढी सुरक्षित मानिन्छ । तर, यी प्रविधिबाट पनि ठिक नभएमा बच्चाको अवस्था धेरै नै गम्भीर या नाजुग भएमा आन्द्रा प्वाल परेको या धेरै दिनदेखिको समस्या भएको अवस्थामा शल्यक्रिया मात्र विकल्प रहन्छ।
शल्यक्रिया गर्दा भित्र छिरेको आन्द्रालाई बाहिर निकाल्ने वा कुहिएको आन्द्रा छ भने त्यसलाई काटेर सामान्य आन्द्रा जोड्नुपर्ने हुन सक्छ । रोग पत्ता लाग्नासाथ उपचार ग¥यो भने निको हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ । यस्तै, यसको जोखिमबाट बच्चालाई जोगाउन सकिन्छ।
(बाल शल्यचिकित्सक डा अधिकारी नेपाल नेसनल हस्पिटल, कलंकीमा कार्यरत छन्)
Previous Article बसको ठक्करबाट माेरङमा साइकलयात्रीको मृत्यु
Next Article शेरबहादुर देउवाबारे चन्द्र भण्डारीले गरे अहिलेसम्मै ठूलो रहस्यपूर्ण खुलासा